Shir ka dhan ah Dowlada dhexe oo ka socda kenya. – Hornafrik Media Network
Muqdisho-Hornafrik-Magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaa shalay, xalay iyo maantaba si isdaba jooga ah uga soconaya shirar looga soo horjeedo dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya, kuwaasi oo ay leeyihiin qaar ka mid ah Madaxweynayaasha maamul Goboleedyada dalka iyo siyaasiyiin kale.
Madaxweynayaasha maamulada Puntland , Galmudug , Koonfur Galbeed iyo Jubbaland ayaa ku sugan Magaalada Nairobi, halkaasi oo ay kula kulmeen xubo ka mid ah beesha caalamka ee arimaha Soomaaliya.
Sido kale wararka laga helayo dalka Kenya ayaa sheegaya in kulamo ay qateen Madaxda maamul Goboledyada iyo qaar ka mid ah xubnaha beesha caalamka ee daneeya arimaha Soomaaliya, waxaana kulankaasi looga hadlayay khilaafka xiligan u dhexeeya dowlada dhexe iyo Madaxda maamul Gobaleedyada oo haatan gaaray meeshii ugu xumeed.
Waxaa la sheegayaa in Madaxweynayaasha maamul Goboleedyada ay xubnaha ay la kulmeen u sheegeen in aysan jirin rajo dhaw oo ku aadan is faham dhex marta labada dhinac.
Madaxweynayaasha maamaul Goboleedyada ayaa marka u soo idlaado kulamada ay ka wadaan Nairtobi, waxaa warar soo baxaya sheegayaan in ay dib u dhigeen shir ay 10-ka bishan ku madalsanyihiin in ay ku yeeshaan Garoowe.